သူရဿဝါနှင့် မဲဆိုမှမဲ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » သူရဿဝါနှင့် မဲဆိုမှမဲ	7
Posted by သူရဿဝါ on Jul 12, 2012 in Creative Writing |7comments
ယခုအခါ မောင်ဝါဝါတို့ လောက တစ်ခွင်ရှိ သက်ရှိ လူသားများ အားလုံးကို မလှုပ်နိုင်အောင် ချုပ်ကိုင် ထားသော အင်အား ကြီးမားသည့် အရာဝတ္ထု တစ်ခု ရှိသည်။ ၄င်းကို မောင်ဝါဝါတို့ မည်သူမျှ လွန်ဆန် ဝံ့သည့် သတ္တိ မရှိကြ၊ ပြန်လည် တွန်းလှန်ရန် အင်အားချင်း မမျှ။ မောင်ဝါဝါတို့ ခါချဉ်ကောင်များ မာန်လည်း မကြီးနိုင်၊ တောင်ကြီး ကိုလည်း မဖြိုနိုင်။ ၄င်းသည် မောင်ဝါဝါ တို့အား တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့၊ တစ်စချင်း ဝါးမြို နေသည်။ မောင်ဝါဝါ တို့ထံသို့ အလုံးအရင်းနှင့် လှိမ့်ဝင်လာသော သူ၏ ကြီးမားသည့် အင်အားများ အောက်တွင် အားလုံး အတုန်းအရုန်း။
ထိုအရာ .. မောင်ဝါဝါ ယခု ပြောနေသော လူသားတို့ကို မလှုပ်နိုင် မပြုနိုင် ဖြစ်နေအောင်၊ သူ့စွမ်းအား ထဲမှ ရုန်းထွက် မရအောင် ချုပ်ကိုင် ထားနိုင်သော ထိုအရာသည် ဘယ်ဟာ ဖြစ်သနည်း။ လူဆိုး တွေလား၊ သူခိုးတွေလား၊ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ တွေလားဟု လျှောက်စဉ်းစား မနေပါနှင့်။ တစ်ခုမှ မဟုတ်ပါ။ ဒါဖြင့် ၄င်းသည် ဘာလဲ။ ဒီလောက်တောင် စွမ်းအားကြီး လှသော အရာသည် ဘာလဲ။ ကံစမ်းမဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် မောင်ဝါဝါတို့ နေ့စဉ် မရှိမဖြစ် အသုံးပြု ထိတွေ့ ဆက်ဆံ နေရသော အရာဝတ္ထု ပစ္စည်းများဆီ တရွေ့ရွေ့ ချဉ်းကပ် အုပ်မိုး၍ လာနေပြီ။ မောင်ဝါဝါတို့ နေ့စဉ် ထိတွေ့ အသုံးပြု နေရသော အရာဝတ္ထု များကို ၄င်းက ချုပ်ကိုင် ထားခြင်း အားဖြင့် မောင်ဝါဝါ တို့၏ တစ်နေ့တာကို ကံစမ်းမဲက ပိုင်ဆိုင် သွားလေ တော့သည်။
အကောင်းဖက်က လှည့်တွေး လျှင်တော့ မောင်ဝါဝါတို့ နေ့စဉ် သုံးစွဲ နေရသော ပစ္စည်းများ အားလုံး လိုလိုတွင် ကံစမ်းမဲများ ပါဝင်သည် ဆိုခြင်းကြောင့် မောင်ဝါဝါ တို့မှာ ကံထမ်းလာတာ မမြင်ရ၊ လှံထမ်းလာတာ မြင်ရ ဆိုသလို အချိန် မရွေး ကံစမ်းမဲ ထ၍ ပေါက်နိုင်ခြေ ရှိသော ကံထူးရှင်လောင်းများ ဖြစ်၍ နေကြသည်။ မောင်ဝါဝါ၏ သူငယ်ချင်း တစ်ဦး ဆိုလျှင် ပေါက်လိုက်သည့် ကံစမ်းမဲ။ သူက နေညိုလျှင် လေပြိုသူ ဆိုတော့ ညနေ ဆိုလျှင် သူငယ်ချင်း တွေနှင့် ဝိုင်းဖွဲ့၍ ဝီစကီ သောက်လေ့ ရှိသည်။ သူ သောက်သည့် ဝီစကီ ကလည်း အဖုံးတွင်းမှာ ကံစမ်းမဲ ပါသည် ဟူသော ဝီစကီ တစ်မျိုး။ ထို ဝီစကီမှာ လက်ငင်း ငွေသား ကံစမ်းမဲ စနစ်နှင့် ဖြစ်သည်။ အဖုံးလေး ဖွင့်၊ ဘယ်လောက် ပေါက်သလဲ ကြည့်၊ ပြီးလျှင် ဆိုင်မှာ ချက်ချင်း ငွေသား သွားပြန်ယူ နိုင်သော စနစ်။ ငွေသား ပမာဏ ဘယ်လောက် အထိ အမြင့်ဆုံး ထည့်သွင်း ထားသည် ဆိုတာတော့ မောင်ဝါဝါ မသိ။
မောင်ဝါဝါ သိသည်မှာ သူငယ်ချင်း သောက်လိုက် သမျှ ပုလင်း၊ ဖွင့်လိုက်သမျှ အဖုံး အားလုံး နီးပါး တို့သည် ကံစမ်းမဲ ပေါက်၍ချည်း နေလေသည်။ သို့သော် များများ စားစား မဟုတ်။ ထို ဝီစကီ ပုလင်း ဝယ်ရသည့် တန်ဖိုးသာသာ ငါးရာ တစ်ထောင် ပေါက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖုံးတိုင်း နီးပါး ကံစမ်းမဲ ပေါက်နေသည် ဆိုတော့ ကံကောင်းသည် ဟူ၍ ပြော၍ ရသည်။ သို့သော် ပေါက်လိုက် သမျှ ကလည်း ငါးရာ၊ တစ်ထောင် ဆိုတာ ကနေ တက်မလာ။ ဒီလောက် ပေါက်နေတာ တစ်ချီလောက် ဆယ်သိန်း ဆယ့်ငါးသိန်းနှင့် တိုးလိုက် ပါလား။ မဟုတ် … ဘယ်အချိန် ဖွင့်ဖွင့်၊ ငါးရာ တစ်ထောင် ခုနစ်ရာ။ အဲဒီနားမှာသာ ပတ်ချာလည် နေသည်။ ဒီတော့ သူ၏ ကံတရားမှာ အမြဲတမ်း ဒီပမာဏပဲ ဆိုတော့ ခပ်တန်းတန်း ဖြစ်နေသော ကံပေပဲဟု သတ်မှတ်၍ ရသည်။
မောင်ဝါဝါ့ သူငယ်ချင်းမှာ တစ်ပုလင်း ဝယ်လိုက်၊ သောက်လိုက်၊ အဖုံးဖွင့်လိုက် ငါးရာ တစ်ထောင် ပေါက်လိုက်၊ ပေါက်သည့် ငွေက ထိုပုလင်း တစ်ပုလင်းစာ တန်ဖိုးမျှ ရှိသည် ဆိုတော့ တစ်ပုလင်းစာ အလကား ရတာပဲဟု ဆိုကာ ပေါက်သည့် ငွေကို ငွေမယူ တော့ဘဲ နောက်တစ်ပုလင်း ယူကာ ပြန်လာလိုက်၊ ထပ်သောက်လိုက်၊ အဖုံးဖွင့်လိုက်၊ ထပ် ပေါက်လိုက်၊ နောက်ထပ် တစ်ပုလင်း ယူလိုက်၊ ဖွင့်လိုက်နှင့် ကံစမ်းမဲ အပေါက်လွန်ကာ နောက်ဆုံး ခေါင်း မထောင် နိုင်အောင် မှောက်လျှင်မှောက်၊ မဟုတ်လျှင် အန်ဖတ်ဆို့၍ ဆေးခန်းရောက် ဖြစ်မှပင် ကံစမ်းမဲ ပေါက်ခြင်း အမှုကိစ္စမှာ ပြီးပြတ် လေတော့သည်။ ကဲ .. ကံစမ်းမဲ အလွန် ပေါက်၍ ကံက တန်းနေပြန် တော့လည်း မကောင်း။
မောင်ဝါဝါတို့၏ တစ်နေ့တာမှာ ထိုကံစမ်းမဲ များနှင့် အချိန်ပြည့် ပတ်သက်၍သာ နေရ၏။ ရေဆာ၍ ရေသန့် ဝယ်သောက်လိုက် .. ရေသောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ အသစ်စက်စက် LCD တီဗီကြီး ပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်မလာဟု မည်သူ ပြောနိုင်သလဲ။ အပျင်းပြေ နေကြာစေ့လေး ဝယ်စားလိုက် … နေကြာစေ့ပင် အခွံ မနွှာရသေး၊ အသစ်စက်စက် တန်ဖိုးကြီး ကားတစ်စီး ပိုင်ရှင် မဖြစ်နိုင်ဟု မည်သူ ငြင်းဆန် ဝံ့သနည်း။ မျက်နှာ လိမ်းရန် အတွက် သနပ်ခါး တစ်ဘူး သွားဝယ်လိုက် … သနပ်ခါး လိမ်း၍ ပါးပေါ်မှာပင် မခြောက်သေး၊ နောက်ဆုံးထွက် iPad အကောင်းစားကြီး ပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်မလာဟု မည်သူ ခေါင်းခါရဲ သလဲ။ သူငယ်ချင်း များနှင့် အပျင်းပြေ ဝိုင်းဖွဲ့ စုထိုင်၍ ထွေရာလေးပါး စကား ပြောရင်း လက်ဖက်သုပ် အထုပ်ကလေး သုပ်စားရန် ဖောက်လိုက် … လက်ဖက်ပင် ပါးစပ်ထဲ မရောက်သေး၊ ဗုဒ္ဓဂါယာကို နာမည်ကျော် မင်းသား မင်းသမီး တစ်ဦးဦးနှင့် ဘုရားဖူး သွားရမည့် အခွင့်အရေး ရမလာနိုင်ဘူးဟု ဘယ်သူ မျက်လုံးစုံမှိတ် ငြင်းရဲသလဲ။ အို …. မျှော်လင့်ချက် များစွာဖြင့် ပျော်စရာ ကောင်းလှသော ကံစမ်းမဲ များဖြင့် တန်ဆာဆင် ထားသည့် လောကကြီး ဖြစ်၍ပင် နေလေသည်။
ကိုင်း … မောင်ဝါဝါ ဘာလုပ် မည်နည်း။ ကံစမ်းမဲ ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ်က ကံစမ်းမဲ ပေါက်အောင် ထိုင်စောင့် နေသူ အဖြစ်ခံ မလား။ ဒါမှမဟုတ် ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးသူ အဖြစ် ခံယူမလား။ ဘယ်ရမလဲ … ကြံရည် ဖန်ရည် ရှိသည့် မောင်ဝါဝါ ပေပဲ။ မောင်ဝါဝါ့ လုံးချင်း စာအုပ် တစ်အုပ် ထွက်မည် ဆိုတော့ ဒီအတိုင်း ရိုးရိုးကြီး ရောင်းလျှင် သိပ်ပြီး ရောင်းရမှာ မဟုတ်။ စာအုပ် ဝယ်ဖတ်လျှင် ကံစမ်းမဲ ပေါက်မည် ဟူ၍ ကြေငြာပြီး ရောင်းလိုက်လျှင် မောင်ဝါဝါ့ စာအုပ် ပေါက်သွား နိုင်သည်။ အဲ .. ကံစမ်းမဲ ပေးမည် ဆိုသော်လည်း သူများတွေလို ကားတွေ၊ ဖုန်းတွေ၊ တီဗီတွေ၊ ငွေသိန်းပေါင်း များစွာတွေ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေး နိုင်သည့် အင်အားတော့ မောင်ဝါဝါ့မှာ မရှိ။ ဒါပေမယ့် ခေတ်လည်း မှီအောင် မရှိ ရှိတာလေးနှင့် မဖြစ် ဖြစ်အောင် ကြံရမည်။ မောင်ဝါဝါ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေး နိုင်တာ ဘာတွေများ ရှိမလဲဟု အချိန်ယူ စဉ်းစား ပြီးနောက် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် များမကြာမီ အချိန်တွင် မောင်ဝါဝါ၏ ကံစမ်းမဲ ပါဝင်သော လုံးချင်းစာအုပ် ထွက်ရှိကြောင်း ကြော်ငြာမှာ တီဗီများ၊ ဂျာနယ်များတွင် အောက်ပါ အတိုင်း ခန့်ခန့်ညားညား ပါဝင်လာ လေတော့ သတည်း။
စာရေးဆရာ သူရဿဝါ၏ “အပယ်လေးဘုံမှာ စုန်ဆန်နေတဲ့ … ငါ” ဟူသည့်
ရင်ထိတ်သည်းဖို အချစ် အလွမ်း စွန့်စားခန်း ဟာသ မော်ဒန် ဂမ္ဘီရ လျှို့ဝှက်သည်းဖို စုံထောက် ဝတ္ထုကြီးကို
ရန်သူမျိုးငါးပါး စာပေမှ တစ်နိုင်ငံ လုံးသို့ အုန်းအုန်းကျွက်ကျွက် ဖြန့်ချိ လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းစာအုပ်ကို ဝယ်ယူ ဖတ်ရှုသူများ အနေနှင့် လက်ငင်း တိုက်ရိုက် ကံစမ်းမဲ အဖြစ်
ဂျပန်ဖိနပ်များ၊ တရုတ် နိုင်ငံထုတ် စွပ်ကျယ် အကျီ င်္များ၊ ယိုးဒယား နိုင်ငံထုတ် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များ၊
ဂျိုးသိန်း ဆေးပေါ့လိပ်များ၊ ကော်ဖီမစ်ထုပ်များ စသည်တို့ကို တိုက်ရိုက် ပေါက်မဲများ အဖြစ်
ထည့်သွင်း ပေးထားပါသည်။ ကံစမ်းမဲ အထူးဆု Grand Prize အနေဖြင့်
မောင်ဝါဝါ၏ ယောက္ခမကြီးနှင့်အတူ ငရဲကြီးရှစ်ထပ်သို့ သုံးလအိပ် လေးလခရီး
အလည်အပတ် သွားရောက် နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းအထူးဆုကြီး ဖောက်ပေးသည့် အခမ်းအနားကို
လာမည့် အောက်တိုဘာလ ကုန်ခါနီး တစ်ရက်ရက်တွင် မောင်ဝါဝါတို့ လမ်းထိပ်ရှိ
ညောင်ပင်အောက် ကွပ်ပျစ်ကြီး ပေါ်တွင် သိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက် စည်စည်ကားကား
ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
၁၂ – ဇူလိုင် – ၂၀၁၂
Volume (1), Issue (42)
သူ ရဿဝါ has written 157 post in this blog.
25 Years Old From Yangon | Myanmar |
Writer | Blogger |
Stand-up Comedian |
Freelance Web Designer |
Admin Member of Suboo Multi Social Network |
Contact Me as Followings,
View all posts by သူရဿဝါ →	Blog
Facebook Share this:	Community Answers
မောင်ပေ says: အဲဒီစာအုပ်ကိုတော့ မဝယ်ရေးချ မဝယ်ဘဲ ဗျို့ 
ရယ်ရလွန်းလို့ လက်မတစ်ချောင်းထောင်ရင်း အားပေးပါတယ် ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1074
Wow says: သာမီးလဲထောင်သွားဒယ်ဗျို့… လက်မ…
ရှေ့ကဦးပေတို့လိုလူဂျီးဒွေကအားပေးတော့ လိုက်အားပေးရတာပေါ့…. ရှေ့ဆောင်နွားလားဖြောင့်ဖြောင့်သွားသော်ဆိုလား… အယ်… ကန်တော့…လူဂျီးကို စော်ကားမိပြီ….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9987
မောင်ပေ says: နွားမဒမ်းမလေးလို ယဉ်ရှာသူလေး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1266
Shwe Ei says: အရောင်းသွက်တဆယ်ထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက၀င်ချင်ရင်တော့ ရွာထဲက မားကက်တင်းဆရာတွေက ပညာနဲ့အခမဲ့ ပံ့ပိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ အော် ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးလိုက်ဖို့လဲ မမေ့နဲ့အုံးနော်။ ပညာရှင်ကြေးပေါ့။
လတ်လတ် says: ခယ်မလေး အဆစ်ရရင်တော့ဝယ်မယ်….ဟွန်. ;)
ယမမင်းနဲ. နာလို.က ရွှေညိုးတွေလေ …..ငိငိ….. :P
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1671
shwe kyi says: ယောက္ခမကိုချစ်ပုံရတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်ဦးမှ ကော်ဖီမစ်လေးများပေါက်မလားလို့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 828
ကြောင်လေး says: အဲဒီယောက္ခမအိုကြီးကိုပြုစုဖို့ ခယ်မလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် အထူးဆုကြီးပေါက်အောင် အုပ်တစ်ထောင်လောက်ဝယ်အားပေးလိုက်ပါ့မယ် သရော်စာက၀်ိပညာရှိကိုရဲလိုးရဲလိုးရေ……….
Comments By Postဒေဝေါ ဆိုသည်မှာ - surmi - ကြက်အူလှည့်Floral Gift - Macro Series - ကြက်အူလှည့် - Miss Crystallineလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - surmi - မဟာရာဇာ အံစာတုံးSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - Foreign Resident - baydar maungဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - surmi - Foreign Residentစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - surmi - padonmarဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - San Hla Gyi - Foreign Residentဆြာအုပ်ကလိထားတဲ့ HDR - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်သစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - surmi - Foreign ResidentCongress - surmi - padonmarတံတွေးစွပ်ခဲ့ပါ နိုင်းနိုင်းစနေ - surmi - Foreign Residentနာဂစ်၏ လက်ဆောင်မွန် - surmi - အလင်း ဆက်သန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - Mလုလင်ကွက်လပ်ဖြည့်စိတ်ဓါတ် - padonmarစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - padonmar - padonmarပေါင်းစု - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံးကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - Mလုလင် - padonmarဖိုင်နယ်မှာ အပိုင်တွယ်မှာက - Myo Thant - သခင် mobileသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - nicolus agral - uncle gyiအိုဘယ့် ...ခရီးသည် - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - Mr. MarGa - ko pauk mandalayခရီးသည်လေးသို့ - အလင်း ဆက် - လင်းဇော် ထက်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - မဟာရာဇာ အံစာတုံးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67526 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59610 Kyats )MaMa (58073 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ )
ကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ)